Top News:-Gabadhii Muqdisho lagu dilay maanta iyo waxa ay ka ahayd -News and information about Somalia
Home Warkii Top News:-Gabadhii Muqdisho lagu dilay maanta iyo waxa ay ka ahayd
Top News:-Gabadhii Muqdisho lagu dilay maanta iyo waxa ay ka ahayd
Ciidamada Booliiska Soomaaliya ayaa maanta suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku toogtay afar qof ,oo mid kamid ah ay aheyd haweeney, kuwaas oo dhamaantood ka tirsan Al-Shabaab.
Faah-faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xubnaha Shabaabka ah ee la toogtay, sida ay ku waramayaan hey’adaha amaanka iyo ganacsatada Bakaaraha, oo la hadlay
Warkii.com ayaa heshay xog ku saabsan qofka dumarka ah ee ku jirta dadka maanta la toogtay, taas oo shegaysa in ay aheyd sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
Dhowr qof oo ka mid ah ganacsatada suuqa Baakaraha ayaa noo sheegay in qofka dumarka ah ee la toogtay ay caan ka aheyd gudaha suuqa.
Haweeneydaan ayaa wareejin jirtay dharka, boorsooyinka la gashado mobile-ka iyo airphone-ka mobile-ka lagu dhageesto.
Sidoo kale waxay wareejin jirtay boorsooyinka la gashado kaararka aqoonsiga (ID CARDS), iyo tusbaxa electronic-ga ah ee farta la gashado iyo agabyo kale.
Magac sax ah oo lagu yaqaano malahan, balse waxay dadka qaar ugu yeeri jirayn Faadumo Deeqo, halka qaar kale ay magaceeda ugu sheegtay Deeqa.
Sidoo kale, saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa Dalkaan.com u sheegay in qofka dumarka ah ay aheyd taliyihii hogaaminayay 3-da wiil ee la dilay, ayna ku amartay in ay dagalaamaan oo aysan is-dhiibin.
Waxay booliisku sheegeyn in ay u qaybisay laba bastoolad oo bakaarof iyo mid biljim ah, waxayna isku dayeen in ay is-difaacaan.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Al-Shabaab u qaabilsan fulinta dilalka qorsheysan ee suuqa Bakaaraha iyadoo madax u aheyd koox arimahaas qaabilsan.
Xaqiiqda ah inay iska dhigi jirtay qof ganacsada, ayaa muujineysa in ganacsigeedu ahaa been, balse ay ku gaban jirtay si ay howlaheeda kale u fuliso.
Previous articleGudiga doorashada Jubbaland oo sadax maalin dib u dhigay doorashada
Next articleXOG HOOSE :-Furitaanka shirkii Dib-u-heshiisiinta Dh/Mareeb oo markale baaqday, burburna ku socdo
XOG: Axmed Madoobe Oo Lagala Noqday Baasaboorkii Uu Dibada Ku Aadi Jiray
XOG: Wasiir Khadiijo oo masuq maasuq lagu helay & Kheyre oo furka tuurtay
DEG DEG: Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Galmudug oo is casilay
MW farmaajo oo raaligelin ka bixiyay Dhibaatadii Dowladdii Kacaanka ay u...
Kenya Oo Sheegtay In Wafdigii Uga Qeyb Galay Caleemo-Saarkii A/Madoobe Ay...